သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို AYTYUNS ကို UPDATE လုပ်နည်း - ITUNES ကို - 2019
disk ကိုရုပ်ပုံများကိုယခု ပို. ပို. လူကြိုက်များနှင့်ကျယ်ပြန့်ဖြစ်လာကြပြီ, နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ CD ကိုနှင့် DVD ကို discs တွေကိုသမိုင်းသို့အနည်းငယ်မှိန်ရှိသည်။ သုံးစွဲဖို့အလွယ်ကူဆုံးတစ်ခုမှာ, ထို့ကြောင့်ဘုံအစီအစဉ်များသည်ဤတူညီသောပုံရိပ်တွေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အရက် 120% ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပရိုဂရမ်အလုပ်လုပ်တယ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် - က virtual disk ကို (drive ကို) နေသူများကဖန်တီး program ကို၏တူညီသောသို့မဟုတ်အခြားပုံရိပ်အတွက်အားဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည့်ရန်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဤတပ်ဆင်အရက် 120% စဉ်အတွင်းဖန်တီးနေကြသည်။
သို့သော်အချို့ကိစ္စ၌အရက် 120% အတွက် re-ဖန်တီးနေတဲ့ကို virtual disk ကိုရန်လိုအပ်ပေသည်။ ကတစ်ပြိုင်နက်တည်းနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောကို virtual disk တွေသုံးစွဲဖို့လိုအပ်သည့်အခါတွင်လည်းတာဝန်များ၏ဖန်တီးမှုကားမောင်းဖြစ်ပွားမှုများအတွက်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတာဝန်ဖျော်ဖြေအလွန်ရိုးရှင်းပြီးအစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အရက် 120% ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်
အရက် 120% အတွက်ကို virtual disk ကိုဖန်တီးညွှန်ကြားချက်များ
လက်ဝဲ pane ထဲကပေါ် main menu ကိုမှာ "ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး" အပိုင်းအတွက်ကို item "Virtual Disk ကို" ကိုရွေးချယ်ပါ။ သငျသညျပစ္စည်းမမြင်နိုင်ဘူးလျှင်, mouse ကိုဘီးချ scroll ဒါမှမဟုတ်စာစောင်ကို menu ကိုနှိပ်ပါ။
အလိုရှိသောအဖြစ်အပေါငျးတို့သ parameters တွေကို Specify ။ ဒါကြောင့်လိုအပ်လျှင်, အသုံးပြုသူအများအပြားက virtual drive တွေကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဒီအဆုံးရန်, ကမ္ပည်းစာမှလာမယ့် "ကို virtual disk တွေအရေအတွက်" သူတို့နံပါတ်များကိုရွေးချယ်ဖို့။ တဦးတည်း drive ကိုသင်ပြီးသားဖန်တီးပါကတစ်စက္ကန့်ကို virtual disk ကိုဖန်တီးရန်, အရေအတွက်ကို2ကိုရွေးဖို့လိုအပ်ပေသည်။
အောက်ခြေမှာ 'OK "ကိုနှိပ်ပါ။
ထိုနောက်မှအသစ်တစ်ခုကို virtual disk ကို main menu ကိုပြသနေသည်။
ယနေ့အထိလူကြိုက်အများဆုံးတအသစ်တစ်ခုကို virtual disk ကိုဖန်တီးရန်ရိုးရှင်းတဲ့လမ်းဒီတော့ထုံးစံ software ကိုအရက် 120% ။ တဦးတည်းနိုင်ပါတယ်ပင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူအရာအားလုံးကိုအလွန်လျှင်မြန်စွာနှင့်လွယ်ကူစွာပြုမိကြောင်းတွေ့မြင်ဒါကြောင့်ဒီတာဝန်ကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။